Germalka Dadka kasoo horjeeda Talaalka oo Hanjabay Dhaqaatiirta iyo Shaqaalaha Caafimaadka
HomeWararka CaalamkaGermalka Dadka kasoo horjeeda Talaalka oo Hanjabay Dhaqaatiirta iyo Shaqaalaha Caafimaadka
November 20, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
kuwa ka soo horjeeda tallaalka coronavirus. ayaa han jabaad u diray dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ee Dalka Germalka.
Tiro ka mid ah dhakhaatiir Jarmal ah ayaa ka warbixiyay dhacdooyinka xadgudubyada sii kordhaya ee xarumaha caafimaadka iyo sidoo kale helida warqado hanjabaad ah boostada oo ka yimid ololeyaasha ka hortagga tallaalka ee dalka oo dhan.
Arrintan ayaa hay’ado caafimaad oo ay todobaadkan la xiriirtay DW waxay ka digeen jawi colaadeed oo cajiib ah oo ka jira xarumo caafimaad oo badan oo ku yaal dalka Jarmalka.
arinta waxay ku soo beegantay iyadoo dhaawacyada Corona ee dalka ay gaareen heerar aan hore loo arag, iyadoo Jarmalku uu diiwaan geliyay Khamiistii la soo dhaafay tiradii ugu badneyd ee cudurro cusub oo adduunka ah, oo gaaray in ka badan 50 kun oo dhaawac ah.
Eric Budendyk, madaxa Ururka Dhakhaatiirta Saxony. Wareysi uu siiyay DW ayuu ku sheegay in cimiladu ay noqotay mid colaadeed, xagjirnimada dadka ayaa aad u kordheysa, ilaa heer ay dhakhaatiirta qaar ay soo gaareen hanjabaado dil ah.
Waxa uu sheegay in shaqsi ahaantiisa loo hanjabay sababo la xiriira xilka uu hayo ee Guddoomiyaha Ururka Dhakhaatiirta, isaga oo intaas ku daray, “Nooca email-ka ah ee la ii soo diray waxa uu ahaa weerar shakhsi ah